Na-ewu ewu na kediegwu atụmatụ nke Android, nza nke Nokia ọrụ okporo mmiri Nokia maka Android. Dị ka otu n'ime ha, o nwere ike ejikere gị mgbe na-a onwunwu Sony Ericsson Xperia ekwentị. Otú ọ dị, ihe na-ahapụ gị bụ na ọ na-esi ike nyefee faịlụ site Nokia ka Sony. Ọ bụrụ na ị na-afịna nke a, ị bụ oké kechioma. Ebe a bụ mma Nokia ka Sony transfer ngwá ọrụ nke na-eme ka ị na nke a. Ọ bụ Wondershare MobileTrans. Ọ na-ahapụ ị nyefee ozi ederede, music, photos, SMS na kọntaktị site Nokia ka Sony mfe.
Nyefee faịlụ site Nokia ka Sony Efforlessly
Na Nokia ka Sony transfer ngwá ọrụ, ị na-enwe ike nyefee kọntaktị, foto, video, music na SMS si Nokia ka Sony na 1 Pịa.
Nyefee kọntaktị site Nokia ka Sony na otu click.
Tọghata ma nyefee video na ọdịyo na Sony dakọtara usoro.
Detuo foto na ozi ederede site Nokia ka Sony na a ngwa ngwa ọsọ.
Ndabere ekwentị Nokia gị na kọmputa, otú i nwere ike weghachi ya na gị na Sony ekwentị mgbe e mesịrị.
Nkwado Symbian 40/60 / ^ 3, Windows 8 / 8.1 na Android 2.1 na elu.
1 Pịa transfer, Ya mere, Quick
Ọ bụ na-enweghị isi nyefee faịlụ otu otu. Kama, ọ na-enye gị ohere nyefee faịlụ niile na 1 Pịa.
Nyefee na Ndi ana-akpo, SMS wdg
Na ya, ọ na-enye gị ohere iji nyefee kọntaktị, SMS, video, foto na music si Nokia ka Sony.
Ọ dịghị mkpa mgbe ekwentị abụọ bụ nke dị iche iche na-ebu. Ọ na-enye nyefee data n'etiti abụọ ọ bụla ntị.
Naanị nwere Nokian ekwentị ugbu a. Ị nwere ike ndabere gị Nokia ahụ na mbụ enyeghachi Sony mgbe e mesịrị.
Akwado Nokia na Sony Ịdị
Windows 8 / 8.1 Nokia N8, Nokia E6, Nokia 5320 XpressMusic, Nokia 5320, Nokia N97, Nokia N97 Obere, Nokia N96, Nokia E72, Nokia 5228, Nokia 6760 Slide, Nokia 6790 anya, Ọzọ ebe a >>
Android 2.1 ma ọ bụ karịa Sony Ericsson LT26i Xperia Arc HD, Sony Ericsson LT18i Xperia Arc, Sony ST26i Xperia J, ony Ericsson C6603 Xperia Z, Sony Ericsson C6602 Xperia Z, Sony Ericsson ST25i Xperia U, Sony C2105 Xperia L, Ọzọ ebe a >>
Nkebi nke 1: otú nyefee faịlụ site Nokia ka Sony na 1 Pịa
Nkebi nke 2: ndabere gị Nokia na ekwentị na Weghachi Gị Sony
Nzọụkwụ 1. ẹkedori Nokia ka Sony ekwentị Nyefee Ngwá Ọrụ
Ihe mbụ bụ ibudata na wụnye Wondershare MobileTrans na kọmputa. Ẹkedori ya. Na ya isi window, pịa Malite ịbanye Nokia ka Sony transfer window.
Nzọụkwụ 2. Bilie gị Nokia na Sony ekwentị Jikọrọ
Wepụ USB Gịnị jikọọ ma Nokia na Sony ekwentị na kọmputa. Ka anya dị ka ahụrụ ịga nke ọma, ha ga-egosi n'elu ke window.
Nzọụkwụ 3. Nyefee Text Ozi, Ndi ana-akpo, Video, Music na Photos si Nokia ka Sony
Họrọ faịlụ ị na-aga nyefee wee pịa Malite Copy. N'oge Nokia ka Sony transfer usoro, na-ma igwe ejikọrọ.
N'ihi na WinPhones, Mobiletrans anaghị akwado idetuo SMS ma. Iji nyefee kọntaktị site na WinPhone ka Android, biko kwado ha na OneDrive mbụ, mgbe ahụ Wondershare Mobiletrans nwere ike iweghachi kọntaktị na lekwasịrị gam akporo ekwentị.
Gị Sony ekwentị ka bụ iji? Ọ dịghị mkpa. Ị nwere ike ndabere gị Nokia faịlụ na kọmputa mbụ. Mgbe ahụ, weghachi ya na gị na Sony ekwentị mgbe e mesịrị.
Nzọụkwụ 1. Download na wụnye Wondershare MobileTrans
Download na wụnye ngwá ọrụ na kọmputa. Mgbe ahụ, na-agba ya iji nweta ya bụ isi window. Gaa na nkwado ma weghachite mode site na ịpị ndabere.
Nzọụkwụ 2. ndabere faịlụ na gị Nokia ekwentị
Jiri eriri USB jikọọ ekwentị Nokia gị na kọmputa. Mgbe achọpụtara ịga nke ọma, ekwentị Nokia gị ga-egosipụta na ekpe.
Dị ka ị na-ahụ, ị nwere ike ndabere kọntaktị, SMS, video, music na foto na ekwentị Nokia gị. Ego faịlụ na ị chọrọ nkwado ndabere na mpaghara wee pịa Malite Copy.
Nzọụkwụ 3. Weghachi Your Sony ekwentị na Nokia ndabere File
On top n'akụkụ aka ekpe, pịa Back to homepage. Pịa Weghachi ịbanye mgbake window. Chọta na tinye akara Nokia ndabere faịlụ na n'aka ekpe. Mgbe ahụ, ọdịnaya na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ gosiri na n'etiti. Họrọ gị chọrọ ọdịnaya na pịa Malite Copy.
Otú nyefee faịlụ site Nokia ka Android?
Olee otú Gbanwee faịlụ site iPhone ka Android?
Otú nyefee Data Site na otu Android na ekwentị ọzọ?
Olee otú Detuo iPod Music ka Android?
Otú nyefee Data si Nokia ka iPhone?
Olee otú Detuo Foto na Ọzọ si iPad ka Android?
Olee otú Detuo Data si Nokia ka Samsung?
> Resource> Android> otú nyefee Music, SMS, Video, Photos na Ndi ana-akpo si Nokia ka Sony